Wararka - Shiinaha taariikhdiisa barkin
Barkimadu waa nooc ka mid ah qalabka hurdada. Waxaa guud ahaan la rumaysan yahay in barkimooyinku yihiin filleyaal ay dadku u isticmaalaan inay si raaxo leh ugu seexdaan. Sida laga soo xigtay cilmi-baarista caafimaad ee casriga ah, laf-dhabarka bini-aadamka waa xariiq toosan oo xagga hore ah, laakiin wuxuu leeyahay afar dhinac oo fiyoloji ah oo dhinaca ka soo laaban. Si loo ilaaliyo qallooca jirka ee caadiga ah ee qoorta isla markaana loo ilaaliyo howlaha jireed ee caadiga ah inta lagu jiro hurdada, barkimooyinka waa in la isticmaalaa marka la seexanayo. Barkimooyinku guud ahaan waxay ka kooban yihiin laba qaybood: xudunta barkin iyo barkin barkimadeed.
Marka loo eego macluumaadka la xiriira, ereyga barkin waxaa abuuray Cao Cao intii lagu jiray muddadii Saddexda Boqortooyo.
Waxaa la sheegay in habeen ka mid ah, Cao Cao uu u isticmaalay laambad teendhada ciidanka dhexdeeda inuu wax ku akhriyo habeenkii. Saacaddii saddexaad, wuu hurday. Wiilkii buugga ee agtiisa joogay ayaa ka codsaday inuu seexdo. Ma jirin meel lagu kaydiyo xoogaa askar sanduuq alwaax ah sariirta, sidaa darteed wiilkii buugga ayaa si siman sariirta u jiifiyey. Cao Cao aad buu u hurudnaa dhinaca kale, wuxuuna la seexday isagoo itaal daran isagoo madaxiisu saaran yahay sanduuqa alwaaxa, wuxuuna u seexday si xasiloon.
Wiilkii buugga markuu arkay tan, wuxuu ka sameeyay aalad gogosha sariirta alaab jilicsan wuxuuna u soo bandhigay Cao Cao iyadoo loo eegayo qaabka sanduuqa alwaax ee buuga milateriga. Sida 'barkinta', barkimooyinku si tartiib tartiib ah ayey caan ugu noqdeen nolosha dadka.
Rikoodhkii ugu horreeyay ee taariikhda isticmaalka barkimadu wuxuu ka yimid illaa 7000 BC-ilbaxnimadii Mesobotamiya (Mesopotamia waxay ku taal inta u dhexeysa Tigris iyo Furaat-Ciraaq maanta). Waxaa la rumeysan yahay in Masaarida ay leeyihiin barkimo jilicsan oo jilicsan, laakiin badanaa looma isticmaalo. Iyagoo isticmaalaya inbadan, waxay had iyo jeer isticmaalaan tiirar dhagax si ay qoorta u saaraan si ay uga hortagaan cayayaanka inay ku gurguurtaan dhagaha, afka iyo sanka.
Waqtiyadii hore, dadku waxay isticmaali jireen dhagxaan ama xaashi caws ah si ay madaxooda kor ugu qaadaan si ay u seexdaan. Waxay u badan tahay inay ahaayeen barkimooyin aasaasi ah markii "lagu buuray buuraha".
Markii la gaadhay xilligii Dawladdii Dagaalku socday, barkimooyinku horeba way u khaas ahaayeen. Sannadkii 1957, sariir alwaax ah oo si wanaagsan loo ilaaliyay oo barkimooyin bamboo ah ayaa laga soo saaray qabriga Chu ee Muddadii Dagaallada ee Changtaiguan, Xinyang, Henan. Kuwii naga horreeyay waxay bartay barkimooyin xoogaa yar. Sima Guang, oo ah taariikhyahan caan ah oo ka soo jeeda Qoomiyadii Waqooyiga ee Boqortooyada, wuxuu barkin yar u adeegsaday barkin. Markuu hurdo, wuxuu u baahan yahay oo keliya inuu madaxiisa dhaqaajiyo si uu uga soo dhaco barkin, isla markiiba wuu toosaa. Ka dib markii uu soo toosay, ayuu si adag u shaqeeyay oo uu sii waday akhriska. Barkintaan wuxuu ugu magac daray "Barkimadda Booliiska". Si jirka loo xoojiyo loona gaaro ujeedka ah in cudurada la daaweeyo xilliga hurdada, dadkii hore waxay sidoo kale barkinta geliyeen daawo lagu daaweynayo cudurka, kaas oo loogu magac daray "barkin dawaysan". Li Shizhen's "Compendium of Materia Medica" wuxuu yiri: "maqaarka dufanka yar, maqaarka digirta madow, maqaarka beerka, abuurka cassia… u samee barkimooyin duug ah si aragga loo wanaajiyo." Waxaa jira noocyo badan oo barkimooyin ah oo dadka ku dhex jira, kuwaas oo intooda badani yihiin "dab nadiifinta" iyo "kuleylka oo laga qaadayo" ujeedada. Qaybta dhexe ee maskaxda Ming iyo kuraasta Qing badanaa waa la weynaadaa cabir ahaan waxaana loo sameeyaa qaabab kala duwan. Jiirada jaranjarooyinka ayaa ku habboon ku tiirsanaanta iyo wax qaadista marka aad kor u eegayso Qeybtan maskaxda ka mid ah waxaa loo yaqaan "barkin".